သတိပြုရန်: YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြေရှင်းခြင်းတွင်ရရှိသည် - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
အဆိုပါ www.RealYourBrainOnPorn.com YBOP အားပိုင်ရှင်ဟောင်း (များ) များအပြီးတွင် URL နှင့်ပူးပေါင်းပြီးသိသာထင်ရှားသည် နီကိုးလ် R. ချီးမွမ်းYBOP ကိုဖျက်သိမ်းရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် URL ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်ဂယ်ရီ Wilson သည်သူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအပေါ်ချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းခြင်းအဖြစ် RealYourBrainOnPorn.com (RealYBOP) ဒိုမိန်းအမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် YBOP ကိုဖျက်သိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်စတင်ခဲ့သော Prause နှင့်သူမ၏ခရိုနီများ၏ရန်လိုသောလှုပ်ရှားမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းနောက် visitors ည့်သည်များကိုရှုပ်ထွေးစေရန်ကြိုးပမ်းမှုများဖြင့်နောက်ဆုံးတွင် YBOP ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုရှုတ်ချခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 2019 ခုနှစ်, Nicole Prause သည် YBOP ၏လူသိများသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်Wilson ကအပါအဝင် အမှန်တကယ် URL ကို ( "YourBrainOnPorn.com”), YBOP ကိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင် site ဗားရှင်းနှင့်အတူအိုးအိမ်မဲ့စေရန်။ ၎င်းသည် Prause ၏ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် obsessive 8 နှစျကျြော Wilson ကနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming.
Wilson ကသူမ၏လျှောက်လွှာ, စိန်ခေါ်ခဲ့သည် နောက်ဆုံးမှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Wilson ၏နာမ၌မှတ်ပုံတင်ပြီး 2020 ။
ဤအတောအတွင်း, 13, မတ်လ 2019 ရက်နေ့တွင် (ကြိုးစားကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆုပ်ကိုင်ပြီးနောက်လအနည်းငယ်လောက်) ဒံယလေကအေ Burgess RealYourBrainOnPorn.com သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သော domain name ကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ RealYBOP ဆိုဒ်သည်၎င်း၏မွေးဖွားမှုကိုကြေငြာခဲ့သည် တစ်ဦးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာYBOP ၏အိမ်ရှင် Gary Wilson နေထိုင်ပြီး Ashland ရှိ Olandon တွင်ထုတ်ဝေသည်ဟုလိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူအားသတင်းမှားပေးခဲ့သည်။
ရှိပြီးသား၊ ကြာမြင့်စွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့သောဒိုမိန်းအမည် (YourBrainOnPorn) ပါ ၀ င်သည့်ဒိုမိန်းအမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်အချိန်ယူပြီး chutzpah နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအကြံအစည်များကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်အသစ်အားဖန်တီးမှုအသစ်သည်စစ်မှန်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့“ Real” ကိုထည့်သွင်းရန်… ဒီလှည့်စားတတ်သောနာမကိုအမှီအောက်မှာအခြားလူမှုမီဒီယာတွင်တွစ်တာနှင့်စတင်ပါ!
အဆိုပါဗိသုကာ (ချီးမွမ်းခြင်း & Burgessဒီအမှတ်တံဆိပ် - ချိုးဖောက်မဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်သူကိုထို့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားမဟုတ်ဘဲအော်ရီဂွန်၌နထေို။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်သည်ဝီလ်ဆင်နှင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဆက်နွယ်သည်ဟုလူတို့အားလှည့်စားရန်သူတို့တမင်တကာကြိုးစားနေခြင်းလော။
site အသစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ imposter site ကိုဖန်တီးသူများသည်အလွန်တက်ကြွသောလူမှုမီဒီယာအသစ်များစွာကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြသည် တွစ်တာအကောင့် (@BrainOnPorn), ယူကျု့ချန်နယ်, Facebook ကစာမျက်နှာနှင့်အမည်အတိုကောက် reddit နှင့် ဝီကီပီးဒီးယား။ မူရင်း RealYBOP YouTube ချန်နယ်၏မျက်နှာပြင်ပုံသည်ဘယ်ဘက်တွင်ရှိသည်။
RealYBOP ၏ reddit အကောင့် (အသုံးပြုသူ / sciencearousal) porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ spammed reddit / pornfree နှင့် reddit / NoFap, မြှင့်တင်ရန် Prause ရဲ့မကြာခဏဝေဖန်လေ့လာမှုများတိုက်ခိုက်ခြင်း porn စွဲ၏အယူအဆ, Wilson ကနှင့် YBOP ရှုတ်ချ, ပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်ယောက်ျား belittlingနှင့် ညစ်ညမ်းသောသံသယများကိုအသရေဖျက်ခြင်း။ (ချီးမွမ်းခြင်း၌တစ် ဦး ရှိပါတယ် ရှည်လျားပြီးမှတ်တမ်းတင်သမိုင်း အလုပ်၏ မြောက်မြားစွာ aliases ညစ်ညမ်းမှုပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များနှင့်အခြားနေရာများတွင်တင်ရန်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Sciencearousal ar / pornfree အဖွဲ့ဝင်အသိပေး လူ ဦး ရေ၏ ၉၉% အတွက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သည် (သုတေသနအခြေအနေကိုတလွဲဖော်ပြခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏အစီအစဉ်များကိုမြှင့်တင်ခြင်း)
Nicole Prause နှင့်တိုက်ဆိုင်မှုရှိသလား သူမ၏ alias ကို @BrainOnPorn“ Sciencearousal” ကြက်တူရွေးသည်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည် အပြတ်အသတ်အပြုသဘော အသုံးပြုသူအားလုံးနီးပါးအတွက်?
အပြင် - porn သည်အရွယ်ရောက်သူအများစုအတွက်အပြုသဘောမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျားအရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုတိုင်းတွင်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ကျေနပ်မှုကင်းမဲ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဖော်ပြသည်။ 80 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဆိုးကျိုးများကိုတင်ပြသောရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုများကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် YBOP ၏အဓိကသုတေသနစာမျက်နှာ.
ပိတ်ပင်ခြင်းမပြုမီ၊ RealYBOP ၏ Wikipedia Wikipedia sockpuppet အကောင့်နှစ်ခု (Sciencearousal နှင့် SecondaryEd2020ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သံသယဖြစ်ဖွယ်လင့်ခ်များထည့်ပြီးတရားဝင်ပစ္စည်းကိုဖျက်ပစ်သည်။ raပြီလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ တွင် Prause sockpuppet မှတည်းဖြတ်သည်။
ဤအချက်အလက်မှားယွင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းပုံမှန်စီးပွားရေးဖြစ်သည် ထင်ရှားသောတရားမ ၀ င်ဝီကီပီးဒီးယား Sraffuppets ၄၀ ကျော်ရှိသည်။ (Wikipedia ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက sockpuppets ကိုတားမြစ်ထားတယ်။ ) ငါတို့သိပြီးသားအချက်တွေကိုအတည်ပြုပြီး Wikipedia ကဖော်ထုတ်ခဲ့သည် Sciencearousal နှင့် SecondaryEd2020 နှစ်ခုအဖြစ် NeuroSex ၏တရားမ ၀ င်လက်ပစ်ကောင်ရှစ်ခုကိုအတည်ပြု - အရာ ခိုင်လုံသောသက်သေသာဓက ထုတ်ဖော်ပြောဆို Prause ဖြစ်ပါတယ်။
ပို၍ ဗြောင်ကျကျလှည့်စားမှု ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သော RealYBOP ဆိုဒ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့သည် visitors ည့်သည်များလှည့်ဖြားရန်။ စာမျက်နှာတိုင်း၏ဗဟိုက“"Porn တွင်အစစ်အမှန်သင့်ဦးနှောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် browser tab က“ Brain On Porn” ဟုမှားယွင်းစွာကြေငြာနေစဉ်
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုလှည့်ဖြားရန် (နှင့် Wilson ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်) RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် Wilson ၏အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော“ YBOP” သို့မဟုတ်“ Your Brain On Porn” နှင့်“ Ted Talk” စသည့်ကုဒ်များပါရှိသည်။ porn "(ရည်ညွှန်းသည် သူ့ရဲ့လူသိများတဲ့ TEDx ဟောပြောချက်) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီမူကြမ်းမိတ္တူကိုသွားပါ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” စာမျက်နှာ, ပုံကိုအပေါ်သို့ပျံဝဲ (ညာဘက်ကလစ်နှိပ်ပါ) နှင့်ပုံ၏ကုဒ် / နာမအဘို့ "View image" သို့မဟုတ် "View image info" ကိုစစ်ဆေးပါ။ Joshua Grubbs ၏ပုံ (Your + Brain + On + Porn) ၏ပုံဥပမာ။
ထို့အပြင် impostor site အတွက် link တစ်ခုကိုအီးမေးလ်တိုင်းပို့သောအခါ“ Brain on your Porn / YBOP” အဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အခါ RealYourBrainOnPorn (@BrainOnPorn) tweet ကိုပြန်လည်တင်ထားသည်။ ၎င်း၏ခေါင်းစဉ်မှာ“ သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn” နှင့်“ YBOP (ကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးအသုံးပြုသောအမည်ပြောင်)” အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ရာထူးတိုး ညစ်ညမ်းသော“ ကျွမ်းကျင်သူများ” စာရင်း။ အဖြစ်တစ်ဦး ချယ်ရီကောက်ယူစာရွက်စာတမ်းများပါ ၀ င်သောစာမျက်နှာ (များစွာသောလေ့လာမှုများမဟုတ်ပါ), ထိုမျက်နှာသာ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏အကျိုးစီးပွား.
RealYBOP ဆိုဒ်ကို“ Real Your Brain On Porn” အမည်ရှိတွစ်တာအကောင့်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။@BrainOnPorn) ။ တကယ်တော့၎င်း၏ မန်နေဂျာ တွစ်တာအကောင့်၏အမြင်များကိုထင်ဟပ်စေသည်ဟုလူသိရှင်ကြား (ယူဆသည် Prause) ကလူသိများသည် ယခုပိတ်နေသော RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ“ ကျွမ်းကျင်သူများ” အားလုံး.
၎င်း၏လေ့ကျင့် "စုပေါင်း" အသံထင်, @BrainOnPorn တွစ်တာအကောင့်ကတွစ်တာ ၁၀၀၀ ကျော်သောအသရေဖျက်မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောထုတ်ပြန်ချက်များ Nicole Prause နှင့်သဘောမတူသူ (ဆိုလိုသည်မှာလိင် / porn လုပ်ငန်း၏ ဦး စားပေးဇာတ်လမ်းကိုဆန့်ကျင်ဝံ့သူမည်သူမဆို) အကြောင်း။ အောက်တိုဘာလ, 2020 ခုနှစ်တွင်အကောင့် အမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည် တွစ်တာစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်Prause ၏မူလတွစ်တာအကောင့်သည်လည်းနှောင့်ယှက်မှုအတွက်အမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်).
မကြာမီက Parler တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သောအကောင့်နှစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ @YourBrainOnPorn နှင့် @Realyourbrainonporn။ RealYBOP ၏ Parler အကောင့်သည်အလားတူလိမ်လည်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများကိုတင်ခဲ့သည် အဆိုပါ @BrainOnPorn အကောင့်ကိုပြု၏:
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လတွင် @YourBrainOnPorn နှင့် @Realyourbrainonporn တို့၏ Parler အကောင့်ကိုလျှို့ဝှက်ထားသည်။
Prause သည် Parler အကောင့်များ (၁) သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုစွပ်စွဲသည် @NoFap အကောင့် ဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီနေ့ကဖန်တီးခဲ့သည် @YourBrainOnPorn (နှင့် NoFap သည်ရှည်လျားသော Prause ၏အခြားပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်)၊ (၂) Parler @NoFap အကောင့် @BrainOnPorn (၃) ကပြုသကဲ့သို့အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများကိုတင်ခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း Parler အကောင့် ထို့အပြင် Parler ကိုလက်ယာဘက်ထွက်ပေါက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး Prause သည်လစ်ဘရယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့်အတွက်အလွန်ထူးဆန်းသည်။
ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များတွင်ပါ ၀ င်မှုအား Prause ကငြင်းဆိုသည်။ သို့သော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေ့လာခြင်း၊ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများ၏စာပေးစာယူ၊ WIPO ၏အစီရင်ခံစာနှင့်အထောက်အထားများစွာသည်သူမ၏ဤအကောင့်များအားစီမံခန့်ခွဲမှုကိုညွှန်ပြသည်
စဉ် ဒံယလေကအေ Burgess www.RealYourBrainOnPorn.com, မှတ်ပုံတင်ပြီး အများအပြားသားကောင်များ သူမ orchestrated ယုံကြည်ပါတယ် အကြောင်းအရာ RealYBOP အကြောင်းနှင့်၎င်း၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များ (အထူးသဖြင့်အလွန်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်) တွစ်တာအကောင့် ၎င်းသည်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းအတွက်တားမြစ်ခြင်းမခံရမီ၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပြproblemsနာများရှိနိုင်ကြောင်းအကြံပြုသူများအားစွဲလမ်း။ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊
RealYBOP သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 16ပြီ ၁၆ ရက်တွင်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၎င်းသည် Wilson ၏ရှေ့နေများသာဖြစ်သည် တိုင်ကြားချက်ကို World Intellectual Property Organization သို့တင်သွင်းခဲ့သည် (WIPO) မှ Daniel A. Burgess သည်ဇူလိုင်လ ၈ ရက်၊ စကားမစပ်, Wilson ရဲ့ရှေ့နေများ www.realyourbrainonporn.com ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးနှင့်စီးပွားရေးအရ Wilson ကလွှဲပြောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းအဖြစ် RealYBOP URL ကိုရှိသူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အလွဲသုံးစားမှု၏ထင်ရှားသော WIPO အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်သုံးသပ်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် WIPO မှအခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့် Wilson သည်သူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်တရား ၀ င်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
အချိန်အတောအတွင်း, WIPO ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို“ လက်နက်ချ” ပါ။ သူမသည်လှည့်ဖြားသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Twitter ပေါ်တွင် WIPO ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းမှားယွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမကပုံဖော်ခဲ့တယ် Wilson က “ သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်” (The Irony!) ခိုးယူရန်မအောင်မြင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အနေဖြင့်၎င်းဝါဒဖြန့်ချီရေးလှုပ်ရှားမှုသည်သူမနှင့်အခြားသူများက“ သူတို့၏သိပ္ပံပညာ” ကိုကြောက်သောကြောင့်“ သူတို့ကို” နှုတ်ပိတ်ချင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သူမ၏ဒဏ္myာရီ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည် သူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက် Prause က Wilson အား“ သိပ္ပံပညာရှင်များကိုရက်စက်သည်” ဟုလိမ်ပြောခဲ့သည် နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Prause သည် WIPO ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအားတရားစွဲဆိုမှုအဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာတရားစွဲဆိုမှုမဟုတ်ခဲ့ပေ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်နောက်ထပ်တရားစွဲဆိုမှုများကိုမလိုအပ်ဘဲပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" Prause ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြေးကဆိုသည်
Burgess သည် RealYBOP URL ၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း Burgess မှမည်သူမျှမသိသောကြောင့် Wilson ၏ရှေ့နေများသည်ပေးပို့ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အက္ခရာများကိုရပ်တန့်ပြီးရပ်တန့်ပါ အားလုံးကို "ကျွမ်းကျင်သူများ" သည်သူ၏ချိုးဖောက် website တွင်စာရင်းဝင် (မေလ ၁၊ ၂၀၁၉) ။ “ ကျွမ်းကျင်သူများ” ၏လက်တဆုပ်စာကအနည်းငယ်သာဖြေခဲ့ပြီး Prause ကို RealYBOP ၏အော်ပရေတာအဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤတွင် RealYBOP သည်ကျွမ်းကျင်သူ Alan McKee မှကျွန်ုပ်တို့၏ C&D စာကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဤတွင် Indiana တက္ကသိုလ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းနှင့် Co-စာရေးဆရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေ၏ C&D စာကို Peter Finn မှပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အဆိုပါ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများ ဖော်ပြပါသို့မဟုတ်သဲလွန်စရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းဒဲနီယယ်ဘာ့ဂတ်သည်သူတို့ရရှိသောအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကိုတုံ့ပြန်သောအခါပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ရှင်းနေသည်မှာသူမ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်သူတို့က Prause နှင့်သာဆက်ဆံသည်ဟုထင်ကြသည်။ (Prause ၏ RealYBOP ၏ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့“ ကျွမ်းကျင်သူများ” - Marty Klein, Lynn Comella, David J. Ley, Emily F. Rothman, Samuel Perry, Taylor Kohut, William Fisher, Peter Finn, Janniko Georgiadis, Erick Janssen, Aleksandar Štulhofer, Joshua Grubbs, James Cantor၊ Michael Seto၊ Justin Lehmiller, Anna Randall, Victoria Hartmann, Julia Velten, Michael Vigorito, Doug Braun-Harvey, David Hersh, Jennifer Valli နှင့် Nicole Prause တို့ကသူ့ကိုယ်သူ)
World Intellectual Property Organisation (WIPO) သည် Prause ၏ RealYBOP နှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများစွာတွေ့ရှိခဲ့သည်
အဆိုပါ WIPO ဆုံးဖြတ်ချက် Wilson က (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တရားဝင်သူ၏နာမ၌မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည်သည်အထိ) URL ကိုမှလွှဲပြောင်းအတွက်မမျှော်လင့်ဘဲနှောင့်နှေးစေ၏။ ဤနေရာတွင်အရေးကြီးသောအချက်မှာ WIPO အဖွဲ့ ၀ င်များပါ ၀ င်သည် လည်း Prause သည်ဆိုက်၏ ဦး ဆောင်ထိန်းချုပ်သူအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည် -“Dr. Burgess၊ Dr. Prause နှင့် Liberos LLC တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိသည်ဟုအဖွဲ့မှသိသာထင်ရှားသည့်အထောက်အထားများတွေ့ရှိရသည်။WIPO အမြင်မှကောက်နုတ်ချက် -
ပြင်ဆင်ထားသောတိုင်ကြားချက်တွင် Dr. Nicole Prause နှင့် Liberos LLC (သူမကုမ္ပဏီ) ကိုဖြေဆိုသူများအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည်ဒိုမိန်းအမည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ မှတ်ပုံတင်သူ၏ WhoIs ဒေတာဘေ့စ်တွင်မတွေ့ရပါ၊ သို့သော်ဒေါက်တာပရာ့စ်သည်“ စိတ်ပညာရှင်နှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များအုပ်စု” တွင် ဦး ဆောင်သူဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားသူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဟုဆိုသည် တုံ့ပြန်မှု။ သူမသည်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဒုတိယစာရင်းဝင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးသူနှင့်ဆက်စပ်မှုကို“ Liberos” ဟုပြသည်။ တိုင်ကြားသူ၏တောင်းဆိုစာကိုတုံ့ပြန်သောကျွမ်းကျင်သူနှစ် ဦး ကသူမဖိတ်ကြားချက်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တိုင်ကြားသူ၏တောင်းဆိုစာအားသူမ၏ကိုယ်စားတုန့်ပြန်သောဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဤရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မှုတွင်ဖြေကြားသူကိုကိုယ်စားပြုသည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Dr. Drause“ DBA Liberos LLC” သည်သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူး၏အွန်လိုင်းဒေတာဘေ့စ်က Liberos LLC သည်ကာလီဖိုးနီးယားမှအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်၊ နီကိုးလ်ပရာယပ်သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။
Dr. Burgess၊ Dr.Prause နှင့် Liberos LLC တို့သည်ဒိုမိန်းအမည်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သည်၊ ဤရှေ့ဆက်မှုတွင်ဘုံအကျိုးစီးပွားများရှိသည်ဟုအဖွဲ့မှသိသာထင်ရှားသည့်အထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Respondents ဟုခေါ်ဝေါ်သော Dr.Prause နှင့် Liberos LLC တို့နှင့်ဆက်နွှယ်နေသောအဖြစ်အပျက်တွင်သူတို့ကိုပါ။ မြင် ရွေးချယ်ထားသော UDRP မေးခွန်းများအတွက် WIPO ၏အဖွဲ့ ၀ င်အမြင်များ၊ တတိယစာစောင် (“ WIPO ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ၃.၀”)၊ အပိုင်း 4.11.2.
ထို့ကြောင့်အထက်ပါစာတန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြေဆိုသူမျိုးစုံအားတိုင်ကြားမှုကို Panel ကခွင့်ပြုထားပြီးထိုပါတီများကိုနောင်တွင်“ တုံ့ပြန်သူ” အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
As အဆိုပါခုံသမာဓိလူကြီးမင်းမှတ်ချက်ချသည်, နှစ်ခုလုံး Prause နှင့် Daniel Burgess တို့သည် Prause ၏ရှေ့နေ Poltrock & Giampietro မှ Wayne B. Giampietro မှအမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုသည်။ အကယ်၍ Prause သည် RealYBOP တွင်မပါ ၀ င်ပါက၊ ဒီမှာ (သူ၏ Wilson ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သူမချိုးဖောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သူမကိုဆက်လက်ကိုယ်စားပြုသော) ရှေ့နေများသည် Daniel Burgess ကိုလည်းကိုယ်စားပြုပါသလား။
RealYourBrainOnPorn Facebook စာမျက်နှာတွင် Prause ၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဆက်အသွယ်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်
RealYBOP Facebook စာမျက်နှာမပျောက်မီ, နီကိုးလ်ပရပ်၏ဖုန်းနံပါတ်အားဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သူမ၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်သူမ၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှေးမှိန်ခဲ့ရသော်လည်း Prause သည်တွစ်တာအပါအ ၀ င်သူမအနေဖြင့်အွန်လိုင်းထိန်းချုပ်သောအခြားစာမျက်နှာများတွင်လည်းထိုနံပါတ်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင်ပိုင်ရှင်အား“ သိပ္ပံပညာရှင်များ” ထက်“ သိပ္ပံပညာရှင်” (အနည်းကိန်း) အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ Prause (၎င်း၏မန်နေဂျာကဲ့သို့) ကပြောကြားခဲ့သည်အတိုင်း RealYBOP သည်အုပ်စုလိုက်အားထုတ်မှုဖြစ်ခဲ့လျှင်အဆုံးတွင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
“ RealYourBrainOnPorn” YouTube ရုပ်သံလိုင်းသည်သူ့အား Nicole Prause (က Prause ကို sockpuppet TruthShallSetSetYouFree ဟုလည်းသတ်မှတ်သည်) ဟုအစပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ရေဗက္ကာ Watson ၏ဗွီဒီယိုကိုချော့မော့ခြင်းထက်စိတ်မရှည်ပါ Rhodes အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု, Prause သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်နှင့် RealYBOP YouTube အကောင့်ကိုသုံးခဲ့သည် အဆိုပါ Watson ဟာဗီဒီယိုအောက်မှာမှတ်ချက်ပေးသူနှင့်အတူငြင်းခုန်။ RealYBOP ၏ထင်မြင်ချက်သည် WIPO ကြားနာခြင်း၊ UCLA တိုင်ကြားမှုများနှင့်သူမ၏စိတ်ပညာလိုင်စင်နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများတွင်သူမ၏အောင်ပွဲများအကြောင်းဖော်ပြရာတွင်၎င်းသည်ပထမပုဂ္ဂိုလ် (“ ကျွန်ုပ်၏လိုင်စင်”၊ “ ငါအနိုင်ရ”) တွင် Prause ရေးသားခဲ့သည့်အလားဖတ်ရသည်။ RealYBOP ၏မှတ်ချက်သည်တရားရုံးစာရွက်စာတမ်း ၂ ခုနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ထားသည် Hilton v ။ ချီးမွမ်းအကြောင်းဤဆောင်းပါး။ (တရားရုံးလျစ်လျူရှုခဲ့သည် လိမ်လည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုချီးမွမ်းပါ နှင့်အမှုပယ်ချရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ )
သားကောင်အဖြစ်စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများသည် စင်ကြယ်သောသင်္ခါရ။ သူမမှာ ကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်.
Watson ကို YouTube နှင့် Twitter ပေါ်တွင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်မကြာမီတွင်၊ RealYBOP YouTube ရုပ်သံလိုင်းက၎င်း၏အမည်ကို“ TruthShallSetYouFree” သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်အထက်ပါမှတ်ချက်သည်သုံးစွဲသူအမည်များကိုပြောင်းလဲစေသည်။
Prause သည်သူမပြင်ဆင်ထားသော YouTube alias ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။TruthShallSetYouFreeသူမရဲ့သားကောင်များအဖြစ်အပျက်များကိုပျံ့နှံ့နေချိန်မှာသူမရဲ့ပုံမှန်ပစ်မှတ်များကိုရှုတ်ချခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်း။
လိင် / ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။
Pornhub သည် @ BrainOnPorn ၏ပထမဆုံး tweet ကို retweet လုပ်ရန်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်
နောက်ကွယ်မှညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုညှိနှိုင်းပြီး Pornhub သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သောတွစ်တာအကောင့် @BrainOnPorn ကိုပြန်လည်ရေးရန်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ပြန်လာအတွက် @BrainOnPorn တွစ်တာအကောင့် Laila Mickelwait နှင့် Exodus Cry တို့ကို ပစ်မှတ်ထား၍ အသရေဖျက်ခြင်းအပါအ ၀ င် PornHub ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ (Mickelwait ရဲ့ တရားမ ၀ င်သောတရားမဝင်သောအကြောင်းအရာများအတွက် PornHub အားတာ ၀ န်ယူရန်အသနားခံစာ လက်မှတ်ပေါင်းတစ်သန်းကျော်စုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။ )
ဒါဟာရှည်လျားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည် နီကိုးလ် Prause နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် David Ley သည် porn-industry အတွင်းရှိလူများစွာနှင့်ကြာရှည်စွာစကားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကစားသမားများသည်နောက်ကွယ်မှဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်နေသည်၊ ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကို၎င်း၏ဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့် Prause ၏ပုံမှန်ပစ်မှတ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအားကူညီသည်။
XBIZ သည် RealYBOP နှင့်ပူးပေါင်းမှုကိုဝန်ခံခဲ့သည်
ဤ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ XBIZ hit-piece @BrainOnPorn ၏ buddy မှ Gustavo Turner မှ RealYBOP ဆိုက်ကိုညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေကြောင်းသက်သေပြသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ XBIZ ဆောင်းပါးသည်“ RealYourBrainOnPorn” သည် YBOP နှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မှုများအတွက်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်.
XBIZ က YBOP သည်“ ရန်ပုံငွေရှာခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ငါ (Wilson) သည် Balderdash အားမှန်ကန်စွာဖော်ပြခဲ့သည်မှာ (၁၀) နှစ်တိုင် YBOP မှရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်ကြော်ငြာမှရရှိခြင်းမရှိသောကြောင့် YBOP ၏စာအုပ်မှရရှိသောကျွန်ုပ်၏ရှယ်ယာများသည်ပရဟိတလုပ်ငန်းသို့သွားသည်။
XBIZ / RealYBOP ၏အဆိုအရ YBOP သည်“ သိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီ” ဟုဆိုထားသည် အဓိက YBOP သုတေသနစာမျက်နှာ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောများပြားလှသောဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည် RealYBOP နှင့်ဆက်စပ်သောလူမှုမီဒီယာများနှင့်ဝေးကွာသွားလိမ့်မည် နည်းသော သိပ္ပံနည်းကျ။ ဤစာမျက်နှာကို RealYBOP ၏သုတေသနစာမျက်နှာဟုချယ်လှယ်သော၊ မကြာခဏဆီလျှော်မှုမရှိသည့်စာရွက်များ (များစွာသောအမှန်တကယ်လေ့လာမှုများမဟုတ်ပါ) နှင့်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ပျက်ကွက်မှုများအဖြစ်ဖော်ပြသည်။
Burgess နှင့် Prause အတွက်ရှေ့နေလည်းခုခံကာကွယ်ခဲ့သည် Backpage.com
YBOP သည် WYPO မှတဆင့် RealYBOP URL အသစ်ကိုစိန်ခေါ်သောအခါ Prause နှင့် Burgess နှစ်ခုလုံးကကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပဒေရေးရာအကြံပေး ဝိန်းခ Giampietro ။ Giampietro ဟာခုခံကာကွယ်ခဲ့တဲ့လိင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာရှေ့နေတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြုသင့်ပါတယ် Backpage.com။ Backpage.com ကိုဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းကြောင့်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ (ဒီကိုကြည့်ပါ USA Today ဆောင်းပါး: Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်.)
စွဲချက်တင်မှုအရ Backpage.com ပိုင်ရှင်များသည်အခြားသူများနှင့်အတူ Backpage.com ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြည့်တန်ဆာပြစ်မှုများကိုသိသိသာသာလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကလူကုန်ကူးခံရသူအချို့သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများပါ ၀ င်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည် Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. Backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
RealYBOP တွစ်တာသည်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့သည် လူကုန်ကူးမှု, Pornhub ကိုကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဗွီဒီယိုများကိုလက်ခံရန်တာဝန်ရှိသည်ဟူသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး
နီးနေစဉ် တိုင်း "RealYBOP" tweet ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်၊ ဤနေရာတွင်စုဆောင်းသည့် tweets အထူးသဖြင့် PornHub (ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ခြင်း) - RealYBOP ၏သစ္စာရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။MindGeek) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤပုံသည် PornHub ကိုကာကွယ်နေစဉ် Laila Mickelwait ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေသော RealYBOP tweets ၁၀၀ ကျော်မှ ၅ ခုကိုစုဆောင်းသည်။ Laila Mickelwait လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများတင်ထားသည့် PornHub အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကင်ပိန်းတစ်ခုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် NY Times အင်္ဂါရပ်.
နောက်ထပ်ဥပမာများစွာကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင် - RealYourBrainOnPorn သည်ညစ်ညမ်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသည်.
RealYBOP တွစ်တာသည်ညစ်ညမ်းသောတွစ်တာ ၁၀၀၀ ကျော်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောတွစ်တာများကိုတစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုထောက်ပြသည်။
RealYBOP သည်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံသည့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအန္တရာယ်များကိုအစီရင်ခံသည့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာတမ်းများကိုမည်သည့်အခါမျှတွစ်တာတွင်မဖော်ပြခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ချယ်ရီကောက်ယူသည့်လေ့လာမှုများကိုလည်းမကြာခဏတလွဲဖော်ပြခဲ့သည် ကိုပြု တွစ်တာ။ သို့သော်၎င်း၏တွစ်တာအများစုသည်ညစ်ညမ်းသော၊ အသရေဖျက်သည့်တွစ်တာများဖြင့် (စက်မှုလုပ်ငန်း၏ဇာတ်ကြောင်းကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သော) လူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုအကျိုးပြုခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာသည်“ တိုက်ခိုက်ခွေး” တွစ်တာများစွာကိုစုဆောင်းသည်။ တချို့ကျတော့အရမ်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။
အချို့သော RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများသည် ၄ ​​င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္areာရီများဖြစ်ကြောင်း porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော xHamster နှင့်ပူးပေါင်းနေကြသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်လူသိများသော RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူ” သုံး ဦး သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောဒေးဗစ်လိုင်၊ Justin Lehmiller နှင့် Chris Donaghue တို့နှင့်ပွင့်လင်းစွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံး 2019 အပေါ်ဖြစ်ကြသည် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ထောငျခါ၏ လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဗြောင်ကျကျဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် SHA များမှာ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်! မြင် "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns။ "
အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူတဦးက StripChat တွစ်တာအကောင့်မှထုတ်ဖော်ပြသ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” အတွက်ငွေပေးရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာဖောက်သည်များဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ရန်သူတို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုသက်သာစေသည်။
SHA သည်ယင်းတို့ကို“ လိင်၊ camming နှင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာနောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနအကြောင်းပြောခြင်း” အားဖြင့်၎င်းင်းတို့၏သုတေသီများလုပ်ဆောင်သောချယ်ရီကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်လိမ့်မည်။ Ley ကိုလုပ်ခဲ့တယ် လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာများပြားလှအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုမှ porn အသုံးပြုမှုကိုလင့်ထားသောဖော်ပြထားခြင်း? Nope ။ ဘက်လိုက်သည်လား? David Ley၊ Justin Lehmiller နှင့် Chris Donaghue တို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိရစေသည် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဆေးရွက်ကြီးဆရာဝန်များ, နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့၏ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး ဆေးရွက်ကြီးဌာန.
နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းရှိသူများနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းသည်အလွန်ကြီးမားလွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သိထားရသည့်အဓိကအချက်များအတွက်သီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း များစွာသော link များနှင့်အမြန် rundown နောက်အခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Prause ၏အသရေဖျက်မှု၊ ညစ်ညမ်းသောသတင်းပို့ခြင်း၊
နောက်ခံသမိုင်း: 2013 ဟောင်းတဦး UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause အတွက် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည်။ (Prause ဇန်နဝါရီလ, 2015 ကတည်းကတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ) တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူမလည်းသုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေ, ကုသ, စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကယခင် UCLA ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနာလန်ထူအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးအပါအဝငျအခွားသူမြားပစ်မှတ်ထားစတင်ခဲ့သည် အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ.)
သူမနိုးထနေသောအချိန်များကိုသူတစ်ပါးအားအနှောင့်အယှက်ပေးနေစဉ် Prause သည်ပါးနပ်စွာပျိုးထောင်ခဲ့သည် သုညဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျသောသက်သေအထောက်အထား - သူမကခဲ့ကြောင်းဒဏ္thာရီ “ သားကောင်” porn ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်လက်ရှိသုတေသနအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏ပြောဆိုချက်များကိုသဘောမတူဝံ့သူမည်သူမဆိုအများဆုံး (ကြည့်ပါ - Nicole Prause ၏သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများသည်အခြေအမြစ်မရှိသောအရာဖြစ်သည်) ။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများကိုတန်ပြန်ရန် YBOP သည် Prause ၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ (ထပ်ဆင့်ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause ၏သားကောင်များသည်ထပ်မံအပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်)
မည်သည့်ကြီးကြပ်မှုမှကင်းလွတ်ပြီးယခုတွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ Prause သည်မီဒီယာမန်နေဂျာနှစ် ဦး မှထပ်တိုးခဲ့သည် မီဒီယာ2×3ကုမ္ပဏီရဲ့သေးငယ်သောတည်ငြိမ်မှုကို "ပူးပေါင်းသူများ" သို့ (မီဒီယာ2×3သမတ Jesse Ponce ကဖော်ပြသည် သူသည်ဟောလိဝုဒ်မီဒီယာနည်းပြနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်.) သူတို့အလုပ်သူတို့ စာနယ်ဇင်းဆောင်းပါးတွေကိုတင်ဖို့ဖြစ်တယ် Prause featuring, သူ့ကိုရှာဖွေ စကားပြောတွေ့ဆုံမှု လိုလားတဲ့ porn နှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနေရာများ။ တစ်ပါမယ်ဘက်မလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်ထူးဆန်းနည်းဗျူဟာ။
လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့်အခြားနေရာများတွင်လူအများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုဆိုက်ဘာနှောင့်ယှက်မှုများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကတည်းက Prause ၏အဓိကပစ်မှတ်မှာ Gary Wilson ဖြစ်သည် (ရာနှင့်ချီသောလူမှုမီဒီယာမှမှတ်ချက်များသည်နောက်ကွယ်မှအီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူမှတ်ချက်ပေးသည်) Prause ၏တွစ်တာနှင့်ပို့စ်များကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်လာသည်။ သူမသည်သူမ၏သားကောင်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အနာဂတ်ဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အရေးကြီးသည်။ သူမ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောက်ယှက်မှုတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုသုံးခု၌တရားခံအဖြစ်စတင်ဝင်ရောက်လာသည်။ Donald ဟီလ်တန်, MD, Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodesနှင့်ရှေ့နေ အာရုန်သည် Minc, JD.
ဤစာမျက်နှာကို နံပါတ် ၂ နှင့်ပတ်သက်သည့်တွစ်တာများနှင့်မှတ်ချက်များနမူနာတစ်ခုပါရှိသည် - သူသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ယင်း၏ရွေးချယ်ထားသည့်ရာထူးများကိုသူမအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံခြင်း။ နှစ်ပေါင်းများစွာသက်သေအထောက်အထားများပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးနောက် YBOP သည် Prause ၏တစ်ဖက်သတ်ကျူးကျော်မှုသည်မကြာခဏနှင့်မဆင်မခြင်သောအသရေဖျက်မှုအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်ဟူသောအမြင်ရှိသည် (သူမ၏သားကောင်များကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း "၏ကိုယ်ထိလက်ရောက်သူမ၏နောက်ယောင်","တကယ","သူမကိုမုဒိမ်းကျင့်ရန်အခြားသူများကိုအားပေးသည်, "နှင့်"နာဇီလက်သစ်ဖြစ်ခြင်း"), ငါတို့သူမ၏ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ရင်းဆန်းစစ်ရန်အနိုင်အထက်ဖြစ်ကြောင်း။ စာမကျြနှာ4အဓိကကဏ္ဍများသို့ကွဲပြား:
Prause ၏ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအနုပညာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်
အပိုင်း ၂– နီပေါလ်သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်“ PornHelps” ရမည်လော။ (PornHelps ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ တွစ်တာတွင် @pornhelps၊ ဆောင်းပါးများမှမှတ်ချက်များ) အကောင့်များအားလုံး Prause အား“ PornHelps” အဖြစ်မှဖယ်ထုတ်ပြီးသည်နှင့်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။
အပိုင်း ၃။ နီကိုးလ်စွဲမှုဥပမာများသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားကိုထောက်ပံ့သောသုတေသနနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊.
အပိုင်း ၄ -“ RealYBOP” - ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံရန် Prause ဒံယလေဘာ့ဂ်နှင့်အပေါင်းအသင်းများသည်ဘက်လိုက်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များတွင်ပူးပေါင်းကြသည်။
Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှရန်ပုံငွေများရရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်မှာမည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမှမရှိပါ။ is ဧကန်အမှန်ထိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကလွှမ်းမိုး။ အဆိုပါ Prause စာမကျြနှာ YBOP သည်အလွန်ကြီးမားသော Prause Iceberg ၏ထိပ်ဖျားဖြစ်သည်။ သူမသည်အကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာတင်ခဲ့သည်၊ လူတိုင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအကြံပြုသူမည်သူမဆိုကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်ပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်သည်။ (နောက်ပိုင်းတွင် Prause ကသူ၏တွစ်တာအကောင့်ကို ၃၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်မပိုသောတွစ်တာများကိုရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ) သူသည်လခတိုင်းလုပ်ငန်းခွင်တွင်ကာကွယ်ရေးကိုအကာအကွယ်ပေးခဲ့သည်။ LA တွင်နေထိုင်သော Prause သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ သူမ၏၏ပုံရိပ် (ဝေးညာ) ပုံ X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်ခေါ်ဆောင်သွား.
"XRCO ဆုကိုအမေရိကန်ကပေးတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူများ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး ထိုသို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။"
သူမ၏ tweets မှသည်ကြောင့် Prause အဆိုပါလည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်ထားပြီးပုံ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်းဆုပေးပွဲ။ ၂၀၁၅ ဇွန်လတွင် Prause က Jeanne Silver ၏ (ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တစ် ဦး) ၏ဇာတ်လမ်းကို“ AVN ၌” ကြားနာခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်းဆုပေးပွဲတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုသတင်းအတွက် Google ရှာဖွေရေး အများအားဖြင့် AVN ဆုပြန်လည်ရောက်ရှိ; ဒုတိယ AVN ကုန်စည်ပြပွဲ) ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူမသည်ညစ်ညမ်းသောကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်ပါတ်သတ်သောသူ၏တွစ်တာတွင် Prause သည် (၂၀၁၉ AVN) ဆုကိုတက်ရောက်ရန်အစီအစဉ်ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ PornHarms Trolling, Prause အခမဲ့တီရှပ်များကမ်းလှမ်း သူနှင့်အတူ trolls ဆန္ဒရှိအခြားသူများ။ အဆိုပါတီရှပ်များ၏တစ်အရသာမရှိသောပျက်လုံးများဖြစ်ကြသည် FTND porn ချစ်ခြင်းမေတ္တာတီရှပ်များဦးသေဆုံး။ အဆိုပါ3ဆုရရှိသူ porn ကြယ်ပွများမှာ!
အပြာကြယ်ပွင့် (Avalon) သည်သြစတြေးလျမှဖြစ်သည်။ သူမက Prause ကိုသူမကိုတီရှပ်တင်ပို့ရန်မှာအလွန်ဈေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်တီဗွီကို“ AVN” တွင်ရွေးလိုပါသလားဟု Prause က Avalon ကိုမေးသည်။ ယုတ္တိရှိသည့်နိဂုံးတစ်ခုမှာ Prause သည် AVN ဆုများ၊ AVN EXPO သို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးကိုတက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။